TOLO-DALANA NAROSO : Azo kitihina ny lalàna mifehy ny fanambadiana
Mampiantrano ny atrikasa ho fakan-kevitra ho amin’ny fampitovian-jo ny maha lahy sy ny maha vavy ary ny ankizy ny eto Mahajanga, mandritra ny roa andro. 5 décembre 2019
Ka ny fiarahamonim-pirenena, ny sampan-draharaham-paritra, ny minisitera maromaro voakasika, ny mpitondra fivavahana sy ny fikambanam-behivavy ary ny olon-tsotra no mpandray anjara amin’izany, izay atao ao amin’ny Restaurant Les roches rouge. Mandritra ny roa andro no anatanterahana io atrik’asa io dia omaly alarobia 04 sy androany alakamisy 05 desambra. Ambohi-pihaonan’ireo Faritany roa dia Toamasina sy Antsiranana ary i Mahajanga kosa no mpampiantrano izao.
Na teo aza ireo lalàna mikasika ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy dia tsikaritra fa mbola betsaka ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy sy ny ankizy. Anisany sakana ho an’ny Malagasy tsy nahatrarana ny tanjona ny fampitovian-jo dia ny resaka fomban-drazana, ka ny ankizivavy tsy mahazo mandova sy tsy mahazo miteny ao an-tokantrano. Ny toe-tsaina sy ny fomban-drazana no mahatonga izany, hoy ireto mpandray anjara. Kanefa noho ny fanatontoloana sy ny toetrandro misy ankehitriny, dia tsy tokony ho lomorina ny amin’izany intsony ny Malagasy, raha tena hitady ny fampandrosoana, hoy ny tompon’andraikitra, satria efa mitovy zo ny lahy sy ny vavy.
Taorian’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa nataon’i Bazezy Vanombe Clavelah Roslan, lehiben’ny Faritra Boeny mpisolo toerana, dia niroso tamin’ny asam-bondrona ho fakan-kevitra ny rehetra. Tolo-kevitra avy amin’ny vondron’ny ranomasimbe indianina na ny COI ity atrikasa natao ity ho fakan-kevitra ny amin’ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy. I Madagasikara sy ny nosy Kaomoro no hamoahana ny lalàna lasitra, hijerena ireo rijan-dalàna maromaro ho fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy.
Ho an’ny lalàna mifehy ny fanambadiana dia azo kitihina tsara araka ny tolo-kevitra naroson’ny fitondrana malagasy ny taona 2017 tany amin’ny firenena mikambana. Nankatoavina izany, saingy tsy ny lalàna mifehy ny fanambadiana ihany no azo kitihina fa ny lalàna rehetra mifototra amin’ny maha lahy sy ny maha vavy. Dia anisan’izany ny lalàna mifehy ny asa ho an’ny lahy sy ny vavy na ilay antsoina hoe “mira lenta”. Eo koa ny lalàna any an-tsekoly ho an’ny ankizilahy sy vavy sy ny eny anivon’ny fiarahamonina fa indrindra ny ao an-tokantrano rehefa manambady ny vehivavy. Ireo indrindra no iompanan’ity atrik’asa fakan-kevitra atao eto Mahajanga ity, ary hatao tolo-dalàna haroso amin’ireo vahoaka eto Mahajanga izay fehin-kevitra azo, ny tolokandron’ny alakamisy 05 desambra mba hahafahan’ny vahoaka mankato na tsia ireo tolo-dalàna voavolavola nandritra ny atrikasa natao.
Noho izany, afaka manome soson-kevitra tsaratsara kokoa ny vahoaka hanampiana ireo vita rafitra tato amin’ny atrik’asa raha ifaneken’ny rehetra. Haravina avy eo dia hatao tolo-dalàna aroso eo anivon’ny minisitra mpiahy aty anivon’ny ranomasimbe indianina izay hanao fitsidihana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara, ao Antananarivo ny 18 sy 19 desambra ho avy izao. Ity farany no hametraka fankatoavana ny tolo-dalàna izay nivohitra nandritra ny atrikasa natao teto Mahajanga ity izao.